TVU ကွန်ယက်များသည်ပြင်သစ်လက်အောက်ရှိရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုတော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲ၏နှလုံးသားထဲသို့ရောက်စေရန်ကူညီပေးသည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » TVU ကွန်ယက်ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားတော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင်၏နှလုံးရယူပါကူညီပေး
ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့ - မေလ 30, 2018 -TVU ကွန်ယက်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ IP ကိုဗီဒီယိုကဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်, ပြင်သစ်ကရွေးချယ်ခဲ့သည် ရုပ်မြင်သံကြား ယင်း၏ကူညီပံ့ပိုးရန် ၏လွှမ်းခြုံ စနေနေ့ 19 မေလပေါ်တွင်မင်းသားဟယ်ရီနှင့် Meghan Markle ၏မင်္ဂလာဆောင်။ ပြင်သစ် 2, franceinfo TV နဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်, အမည်ရအစီအစဉ်တွင်ထုတ်လွှင့် Special Mariage Princier အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်း TVU ကွန်ယက် တိုက်ရိုက်ပေးဖြေရှင်းနည်းများ ဝင်ဆာနှင့်လန်ဒန်မြို့ရှိလမ်းများနှင့်အရက်ဆိုင်ကနေအင်တာဗျူးနှင့်တုံ့ပြန်မှု။
ပြင်သစ် ရုပ်မြင်သံကြား '' လွှမ်းခြုံပဲရစ်အတွက်စတူဒီယိုမှပြန်ပို့စဉ်ဆက်မပြတ်အကြောင်းအရာခုနစ်ခုနာရီ, စုစုပေါင်းနှစ်ခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feeds တွေကိုပါဝင်သည်။ အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည် ကင်မရာသမားတွေထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်သောဧရိယာကျော်ပြောင်းရွှေ့အပေါ်အဆက်မပြတ်စဉ်ယုံကြည်စိတ်ချရသော bandwidth ကိုသေချာစေရန်။ ထုတ်လွှင့်, မိုဘိုင်းယူနစ် TVU One နဲ့ TVU Nano ကို ရွေးချယ်. TVU ကွန်ယက်ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲသူတို့လိုအပ်တဲ့ရိုက်ကူးဖမ်းယူခြင်းနှင့်အထောက်အကူပြုရန် - တက္ကစီအတွက်တစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တဦးတည်း - နှစ်ခုသမားတွေကို enable '' အသစ်က Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည် router ဝါယာကြိုးများသို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာပစ္စည်းကိရိယာများအားဖြင့် encumbered ။
"ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကလတ်ဆတ်တဲ့လှည့်ကွက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွှမ်းခြုံနှင့်အတူဆန်းသစ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ပဲ။ ကျနော်တို့ကတက္ကစီနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို အသုံးပြု. ဝင်ဆာနဲ့လန်ဒန်မှာရှိတဲ့လူအစုအဝေးထဲကနေတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုမကယ်မလွှတ်ချင်တယ်။ ကျနော်တို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယာဉ်အမှုထမ်းများအတွက်အရွယ်အစားနှင့်အလွန်နိမ့်အလေးချိန်လည်းငယ်ကြောင်းအစွမ်းထက်တစ်ခုခုလိုအပ် "Guy Lezec, ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာ, ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားကရှင်းပြသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဤအခြေအနေများတွင်အရေးပါသော mobility စိန်ခေါ်မှုများနှင့်မြင့်မားသောကွန်ရက်က overhead ရှိနေသော်လည်းအကောင်းဆုံးဂီယာအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ signal ကိုမြှင့်တင်ရန်ခဲ့ရသည်။ မှာ TVU ကွန်ယက်ရဲ့တင်ပြချက်များ NAB ပြရန် စုပေါင်း sim ကဒ် 2018 နှင့် TVU nano "ဿုံကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်အားထငျရှား Romuald Rat, သတင်းလွှမ်းခြုံနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးဒါရိုက်တာကဆက်ပြောသည်ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြား။
နှစ်ခု TVU တစ်ခုမှာယူနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးတက္ကစီကနေတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးများဖွဲ့စည်းပထမဦးဆုံးအစာကျွေးခြင်း, သုံးလေယာဉ်ပေါ်ပါ (နှစ်ခု Go ကို Pros အပါအဝင်) ကင်မရာများနှင့်တစ်ဦးသည် router ကဲ့သို့သောအခြားသရုပ်ဆောင်ကနေ signal ကို transmit လုပ်ဖို့တဦးတည်း။ ဒါ့အပြင်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တစ်ဦးအသေးထုတ်လုပ်မှုခလုတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feed ကိုများအတွက်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလူအစုအဝေးတုံ့ပြန်မှုဖမ်းယူနေတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်သင်္ဘောသားတစ်ဦး TVU တစ်ခုမှာယူနစ်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးခဲ့သည် TVU nano, ဂီယာနှင့်တစ်ဦးသည် router အဖြစ်ဒုတိယသရုပ်ဆောင်ကိုထောကျပံ့ဖို့နောက်တဖန်တပါးတည်း။
TVU One နဲ့ TVU nano မကယ်မလွှတ် အားလုံး bandwidth ကိုထိရောက်မှုဦးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ High-ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို တစ်ဦး Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းဟာ့ဒ်ဝဲဒီဇိုင်းအတွင်း။ တဦးတည်း button ကိုစစ်ဆင်ရေးနှင့် 20 စက္ကန့်ထက်လျော့နည်း၏ boot-တက်အချိန်နှင့်အတူမြင့်မားခရီးဆောင်ယူနစ်, ရှည် Set-up ကြိမ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေး, မြေပြေးဝင်တိုက်ဖို့ cameramen enabled ။
တစ်ခုက IP-based high-definition ဗီဒီယိုကလယ်ကွင်း transmitter ကိုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်, TVU တစ်ခုမှာအပ်ပေးတော်မူ၏ ပြင်သစ် ရုပ်မြင်သံကြား အဆိုပါဘက်စုံစွမ်းဆောင်ရည်, အင်္ဂါရပ်တွေသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောရန်မလိုဘဲတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားအလှူငွေဘို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ပြင်သစ်ကရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်အလွန်ဂုဏ်ယူကြသည် ရုပ်မြင်သံကြား ထိုကဲ့သို့သောဂုဏ်သတင်းဖြစ်ရပ်သည်။ အဆိုပါ TVU One နဲ့ nano စနစ်များကး၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး, အားကိုး, မြန်နှုန်းမြင့် bandwidth ကိုလိုအပ်အထူးသဖြင့်လျှောက်လွှာများအတွက်စံပြနေကြတယ် "ဟု Yoni Tayar, ဥရောပစျေးကွက်မန်နေဂျာကပြောပါတယ် TVU ကွန်ယက်။ "ဒီတော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လွှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအပြင်ဘက်ထုတ်လွှင့်အခြေအနေများတွင်တီထွင်ကူညီနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိရောက်၏ပြီးပြည့်စုံဥပမာဖြစ်၏။ "
TVU ကွန်ယက် 2,500 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက် 85 ဖောက်သည်ကျော်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ TVU ကွန်ယက် IP ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏မိသားစုထုတ်လွှင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအွန်လိုင်း, ထုတ်လွှင့်နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းမှတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့အစွမ်းထက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ငန်းအသွားအလာပေးသည်။ TVU အများအပြားအဓိကမီဒီယာကုမ္ပဏီ၏စစ်ဆင်ရေး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါ TVU ကွန်ယက် ဖြေရှင်းချက်၏ suite ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအိုင်ပီ, ဆည်းပူး transmit, ထုတ်လုပ်ရန်, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့အသုံးပြုထားပြီး HD သတင်း, အားကစားနှင့်အဓိကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ရိုက်ကူး။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြား ip NAB 2015 NAB 2016 NAB16 nabshow တော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင် TVU nano TVU ကွန်ယက် TVU တစ်ခုမှာ 2018-05-30
ယခင်: က Sky News, တော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင် UHD / 4K အသံလွှင့်အဘို့ LiveU အသုံးပြု
နောက်တစ်ခု: ဒေတာကိုအတွေ့အကြုံ FE အင်ဂျင်နီယာချုပ် International